Oolmaa mana murtii hogganoota ABO, Caaltuu Taakkalaa fi Yaasiin Juumaa – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsOolmaa mana murtii hogganoota ABO, Caaltuu Taakkalaa fi Yaasiin Juumaa
Qondaaltonni ABO, miseensonnii fi namoonni kaan miseensa ABO hin taanes Jimaata Hagayya 07 mana murtii aanaa magaalaa Sulultaatti dhihaachuu abukaatoo isaanii keessaa tokko kan tahan Dr. Tokkummaa Dhaabaa BBC’tti himaniiru.
(bbcafaanoromoo)–Galmee Koloneel Gammachuu Ayyaanaa jalatti kan himataman Koloneel Gammachuu Ayyaanaa, Dr Shuggux Galataa, Mikaa’el Booran akkasumas barattoota yuunivarsiitii dabalatee namoota 11.
Namoota kanneen ajjeechaa wellisaa Haacaaluu Hundeessaatiin booda akka gabaan ugguramu, akka karaan cufamu, lubbuun namaa akka darbuu fi qabeenyi akka barbadaa’uuf ajaja kennuudhaan akka shakke poolisiin himeera.
Ji’a tokkoon dura too’annoo jala kan oolan hogganoonni ABO kunneen mana murtiitti yoo dhiyaatan kun yeroo duraafi. Maatii fi abukaatota waliinis qunnamtii hin qaban ture.
Abbaan Alangaa poolisiin qorannoo shakkamtoota kanarratti taasisaa ture akka xumuree eeruun, galmeen qorannoo cufamee shakkamtoonni gara mana adabaa akka deemaniif gaafachuus himan Dr. Tokkummaan.
Manni murtichaas Abbaan alangaa guyyaa 15 keessatti himata akka banuu fi yoo guyyaa jedhame kana gidduutti himata hin banne shakkamtoonni kunneen osoo mana murtii hin dhufiin akka gadhiifaman jechuun galmeen cufameera jedhan Dr. Tokkummaan.
Abokaatonni shakkamtootaa gamasaaniin maamiloota isaanii kana amma dura argatanii akka hin beekne himuudhaan gaaffii dhiyeessaniin manni murtii addatti akka dubbisaniif isaanii heyyamee akka ture dubbatu Dr Tokkummaan.
Odeefannoo shakkamtootarraa argatan irratti hundaa’uunis akkaataan qabiinsaa bakka turtii mirga shakkamtootaa kan hin eegnee fi rakkoof kan saaxile ta’uu abbaa murtiitti himuu eeran.
Keessumaa kanneen dhukkuba sukkaaraa fi dhiibbaa dhiigaa qaban qoricha dhibee kanaaf ta’u argachuu dhabuun rakkoof saaxilaamaa akka turan eeran.
Shakkamtoonni akka koloneel Gammachuu Ayyaanaafaa ammoo bakka amma tursiifamaa jiranitti ifa aduu fi nyaata gahaa argachaa akka hin jirres mana murtiitti ibsuu himan abokaatoon kun.
Abbaan seeraas himata shakkamtoonnii fi abokaatoowwan isaanii dhiheeffatan kana ilaaluun akkaataan qabiinsa shakkamtootaa karaa mirga isaanii eegeen akka ta’u kanneen qoricha barbaadaniifis qorrichi akka dhihaatuuf ajajeera jedhan.
Shakkamtoonni kunneen maatii fi abokaatoowwan isaanitiin akka daawwataman ajajamuus himan.
Gama biraatiin Caaltuu Taakkalaas har’a mana murtii aanaa Magaala Sulultaatti dhihaachuu abokaatoon kun BBC’tti himaniiru.
Caaltuun ammaan dura Magaala Finfinneetti too’atamtee koomishinii poolisii magaala Finfinneetti hidhaa kan turtee fi yakka ittiin shakkamteen manni murtii sadarkaa duraa Araadaa wabii qarshii 4000’tin erga gadhiiseen booda poolisii Oromiyaatiin too’atamuun ishee ni yaadatama.
Manni murtii aanaa magaala Sulultaas dhimma Caaltuu kanarratti galmee erga qorateen booda Caaltuun sababa ittiin yeroon beellamaa lammaffaan kennamu hin jiru jechuun, gaaffii Poolisiin too’annaa jala akka turtuuf dhiheesse kufaa gochuun mirga wabii duraatiin akka gadhiifamtu ajajuus himan.
Lammii Beenyaa fi Daawit Abdataa sababa adda addaatiin har’a mana murtiitti akka hin dhihaanne abokaatoon isaanii Dr. Tokkummaan himaniiru.
Yaasiin Juumaa fi kaan
Gama kaaniin Manni Murtii Olaanaa Federaalaa ramaddii Lidataa dhaddachaa har’aatiin [Hagayya 07] ol iyyannoo poolisiin gaafate kuffisuun gaazexeessaa lammii Keeniyaa Yaasiin Juumaa dabalatee namoonni 11 mirgi wabii eegameefii akka gadi dhiifaman murteesse.
Yaasiin Juumaa kan jala jiru galmee Ciibsaa Abdulkariim jalaa nama 5, galmee Jombaa Huseen jalatti ammoo namoota jaha kan mirgi wabii eegameef ta’uu Abukaatoon isaanii Obbo Abdulaxiif Amee Elemoo BBC’tti himan.
Namoonni kunneen manni murtii sadarkaa jalqabaa Roobii Hagayya 05, 2020 mirga wabii kan eegeef ta’ullee poolisiin ol iyyaannoo waan gaafateef gadi hin dhiifamiin hafan.
Gaazexeessan OMN Mallasaa Dirribsaa Roobii darbe namoota kana waliin mirgi wabii eegameefi turus, Jawar Mohaammad fi namoota biroo 12 waliin galmeen qorannoo duraa waan irratti banameef mana murtiitti hin dhiyaanne jedhan Obbo Adulaxiif.
Dhimmi Mallasaa Dirribsaa dhaddacha galmee qorannoo duraa ilaaluun kan ilaalamu yoo ta’u namoonni manni murtii olaanaa mirga wabii eegeef kaan ni gadhiffamu jedhamee eegama.
Jaagamaa Taddalaa Qeerroo New Oromo Music
Qophii ijoo Ummatta Oromoo Artisti Obbo Galaanaa Gaaromsaa ragaa Obbo Jawar Mohammed irraatti bahu j
Kumarraa Darajjee -Dhugaa Sabaa- New Oromo Music 2020. Official Video. Gadaa Digital Studio.
ODUU OWITUU fi Maatiin Ajajaa WBO Konyaa Jimmaa – Jaal Tokkichoo – Ilma Keessan Bosona Jiru Fidaa Je
Oduu fi Gabaasa Oromiyaa kan August 7, 2020